Ejypta: Lahatsarim-pifidianana, Fanapahana ny fanampiana Amerikana ary Bilaogy vaovao avy amin’ilay talen’ny sarimihetsika mana-talenta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2018 3:30 GMT
Notapahan'i Etazonia ny fanampiana an'i Ejypta: Zeinobia maneho hevitra momba ny lalàna amerikana nankatoavina mikendry ny hanery an'i Ejypta hanatsara ny resaka zon'olombelona amin'ny alalan'ny fandavàna ny fanomezana 200 tapitrisa dolara amin'ny famatsiam-bola miaramila raha tsy misy ny fandrosoana vita. Nilaza izy fa “ity no felaka mamaivay ho an'ny mpikambana vaovao voafidy ao amin'ny Filan-kevitry ny zon'olombelona ao amin'ny firenena mitambatra aka Egypt.”
Bilaogina tale mpamokatra sarimihetsika malaza: Am-pireharehana no hampahafantarako ny bilaogin'ilay Ejypsiana mana-talenta izay nanapa-kevitra hibilaogy ny fiainany sy ny tantarany, manome varavarana lehibe misokatra ho antsika mba handinika ny fiainany sy ny vanim-potoanan'ny tantara ao Ejypta. Nanatevin-daharana ny tontolon'ny bilaogy amin'ny fanomezana ny anaran'ny iray amin'ireo horonantsarimihetsika nataony ilay tale Ejypsiana mpamokatra horonantsary sady mpanoratra, Mohamed Khan, teraka tamin'ny taona 1942. Klephty (Arabo) no bilaogin'i Khan. Tamin'ny lahatsorany bilaogy vao haingana indrindra “Is it Destiny!” [izay ve no lahatra], mihevitra izy fa ny bilaoginy no toerana handrafetany ny tantarany, ny fahatsiarovany ary ny eritreriny ary matetika manery azy hahatsiaro zavatra tsy tiany hoeritreretina izany fibilaogina izany. Mihevitra izy fa mahafinaritra ny fomba fiterahan'ny hevitra tsy nahafantatra fa hiposaka izany rehefa manomboka manoratra ianao. Mahaliana ny mahita fa na dia teraka tao Cairo aza i Khan, dia mpifindra-monina ny ray aman-dreniny. Pakistaney ny rainy ary Italiana ny reniny. Feno sary sy tantara tena mahaliana momba ny fiainany sy ny asany izay tsy milaza amintsika momba ny an'i Khan ihany ny bilaoginy fa koa momba ny tantaran'i Ejypta. Arahabao i Klephty tonga eo amin'ny tontolon'ny bilaogy – fanabeazam-boho tanteraka ny bilaogy Ejypsiana izany!
Blogotografia: Maryanne Stroud Gabbani mitatitra an-tsary avy ao Cairo sy Giza ao amin'ny bilaoginy. Monina ao Cairo i Maryanne izay nonina tany Canada teo aloha ary mankafy sary izy. Jereo ao amin'ny bilaoginy vaovao izy ireo!
Sendikan'ny tanora liberaly Ejypsiana ao amin'ny Blogger: Nanangana ny sendika ho an'ny tanora liberaly izay matoky ny fahalalahana, ny fahamarinana sy ny fitoviana ny vondrona tanora. Teraka tamin'ny fahitàna ny fanovana ny lalàmpanorenena, ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemantera tao Ejypta ny hevitra. Nilaza izy ireo fa nanomboka ny sendikà mba hisoloana tena ny vondrona tanora Ejypsiana izay matoky fa ny liberalisma no fomba mitondra fampandrosoana sy ny fandrosoana. Mampiasa blogger izy ireo mba hanoratra momba ny hevitr'izy ireo, ny hetsik'izy ireo, ireo mpanoratra liberaly, kaonferansa ary ny fifidianana birao ao amin'ny sendikan'izy ireo, ankoatra ny lohahevitra hafa.